Fahombiazana - AngelBiss Healthcare Inc.
Nandritra ny taona maro, AngelBiss dia nanao zava-bita sarobidy sasany teo amin'ny sehatry ny concentrator oxygen sy ny milina fitrohana azo entina izay naseho fa manan-danja amin'ny fampiharana ara-pitsaboana olombelona.
NO.1 - Mihoatra ny 18 ny fampiroboroboana ny patanty vaovao sy ny milina fanamafisana ny oxygen
NO.2 - Ny bateria voalohany manerantany dia miakatra 5L Oxygen Concentrator, ny fahadiovan'ny oksizenina dia mahatratra 93%
NO.3— Fitsapana eo an-toerana ANGEL 5S 5L Oxygen concentrator amin'ny Tibet 15000ft, ny fahadiovan'ny oksizenina dia mbola mety hahatratra 93%
NO.4 - Masinina mitsentsitra azo haverina mandritra ny 3 ora tsy misy herin'ny AC
NO.5- 20psi tosidran'ny Oxygen Concentrator avo lenta dia mahatratra 95%
NO.6- 90psi tosidran'ny Oxygen Concentrator avo lenta dia mahatratra 95%
NO.7- 60LPM Dual Flow 4bar Oxygen Generator dia mahatratra 95%
NO.8 -10LPM 7bar Oxygen Generator dia nahatratra 95%
NO.9 - Ny fiovaovan'ny Oxygen Concentrator 0,1% amin'ny 95,5% na ny fifantohana voafaritra hafa.
NO.10 - TUV-SUD nanamarina ny ISO13485: 2016 sy ny CE Certification
NO.11- Betsaka no tsy vonona haseho.
Amin'ny ho avy ho avy, AngelBiss dia hanohy hanao ny ezaka tsara indrindra mba hitondra traikefa vokatra tsara kokoa ho an'ny mpanjifa. Ny ekipa R&D dia manao fikarohana bebe kokoa amin'ny sehatry ny fampiharana isan-karazany, toy ny Nitrogen Oxygen Generator, Aquarium, ary Ozone Application.
AngelBiss dia kendrena ho goavambe hafa ao anatin'ny 10 taona eo amin'ny ekipa haitao sy orinasa mpamokatra iray.